रोजागारीको प्रमुख गन्तव्य नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी सोमबार हुने, रोजगारी खुल्ने – All About Remittance & Fintech
rkeditor November 1, 2018
काठमाडौं। रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा नेपाली कामदार निशुल्क जान पाउने भएका छन्। ६ महिनायता रोकिएको नेपाली कामदारको मलेसिया यात्रा अब खुल्ने तय भएको हो।
नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने समझदारीसँगै ६ महिनायता रोकिएको मलेसियाको रोजगारी अब खुल्नेछ । नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्री एम कुलाशेगरण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज बिष्टले सोमबार समझदारीपश्चात शून्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया जाने बाटो खुल्ने भएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई देशबीचको श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी मन्त्री बिष्टलाई प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
श्रम मन्त्री बिष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालका अनुसार नेपाली कामदारले बीमा, स्वास्थ्य उपचार र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाहेक अन्य पैसा तिर्नु नपर्ने गरी दुई देशबीच समझदारी हुन लागेको हो। स्वास्थ्य परीक्षणमा कामदारले तिर्ने पैसा सम्बन्धित कामदारले मलेसिया गइसकेपछि प्राप्त गर्ने पहिलो महिनाको तलबमै शोधभर्ना पाउने गरी दुई देशबीच समझदारी हुन लागेको उनले जानकारी दिए।
दुई देशको वार्ता टोलीले कामदारको भिसा शुल्क, टिकट शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने समझदारी जुटाएको थियो। त्यसैको आधारमा दुवै देशका मन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन्। कामदारले मेनपावरलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने गरी समझदारी हुन लागेको छ। सेवा शुल्क कामदारको पहिलो महिनाको आधा तलब बराबरको हुनेछ।
मलेसियामा रोजगारी खुलेपछि नेपाली कामदार जाने प्रक्रिया, उनीहरुको सुविधालगायतका विषय यस लगत्तै बन्ने प्राविधिक समितिले टुंगो लगाउनेछ। त्यसका लागि दुवै देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित समिति तत्काल बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम मन्त्री बिष्टले गत जेठमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको भन्दै सम्बन्धित संघसंस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। यस्तै उनले सरकारी तबरबाटै दुई देशबीच कामदार पठाउने निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै नेपाली कामदारलाई मलेसिया जानबाट रोक लगाएका छन्।
कामदारको भिषा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका नाममा ठगी गरेको भन्दै ती संस्था विरुद्ध सरकारले ठगीको कारबाही पनि अघि बढाएको थियो। नेपालबाटै काम गरिरहेका भिएलएन, जिएसजी, माइग्राम्स तथा मेडिकल सञ्चालक विरुद्धको ठगी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार लिने प्रक्रियामा परिवर्तनको तयारी गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएपछि दुई देशबीच औपचारिक समझदारीका लागि वातावरण तय भएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। मलेसियाले नेपाली कामदार एजेन्टबाट नभई सिधै लिने जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको छ।
मलेसियाका मन्त्रीहरुले त्यहाँको संसदीय समितिहरुमा पनि नेपाली कामदार लिने औपचारिक वातावरण बन्दै गएको र समझदारी पछि कामदार आपूर्ति सुरु हुने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
अपर तामाकोशीको आइपिओ सर्वसाधारणकालागि आजदेखि, बिदेशमा रहेका नेपालीले पनी भर्न पाउने !!!
Previous post एक रुपैयाँ नतिरी मलेसिया काम गर्न जान पाइने, तलव ७ तारिखभित्र, अरु के सुविधा पाउँछन् नेपालीले?
Next post अपर तामाकोशीको आइपिओ सर्वसाधारणकालागि आजदेखि, बिदेशमा रहेका नेपालीले पनी भर्न पाउने !!!